TSY FANDRIAMPAHALEMANA AO TOAMASINA : Nivory maika ny "Organe Mixte de Conception"
Ao anatin’ny tebiteby lava ny mponina ao Toamasina manoloana ny firongatry ny tsy fandriampahalemana. 16 mai 2019
Ny talata 14 mey, nivory maika ny Omc (Organe mixte de conception). Fivoriana toy ny mahazatra izay notarihin’ny prefen’i Toamasina sady lehiben’ny Omc, Cyrille Benandrasana. Araka ny antso an-taroby nifanaovana tamin’ny prefen’i Toamasina, ny harivan’ny talata 14 mey io, dia nasiaka ny tenany nandritra ny fivoriana ary misy fepetra hentitra noraisina.
Fepetra izay nambarany fa afaka mitondra filaminana ao Toamasina. Raha ny zava-misy, dia efa saika ny fokontany rehetra ao an-toerana no isehoana trangana tsy fandriampahalemana. Anisany tena mavaivay kosa ny ao Vohitsara, Dépôt 4e. Efatr’andro mialohan’ny nahitana ny fatin’ireo olona telo mianaka tao amin’ny fokontany Dépôt 4e, ny harivan’ny alatsinainy lasa teo, dia efa nitrangan’ny fanafihana mitam-piadiana tsy lavitra ilay trano nahitana ny razana. Fanafihana mitam-piadiana naharatrana olona roa. Zandary ilay anisany naratra mafy voan’ny vely hazo sy famaky.
Mahakasika iny vono olona tao amin’ny fokontany Dépot 4e iny, hatramin’izao dia olona efatra no nosamborina anaovana fanadihadiana. Izy efa-dahy izay voalaza fa mpiasa niasa nanamboatra ilay trano fonenan’izy 3 mianaka. Mitohy kosa ny fikarohana ilay mpiambina ny trano izay tsy mbola hita popoka hatramin’izao. Ny talata 14 mey tamin’ny 6 ora hariva no vita ny fandevenana azy telo mianaka tao amin’ny fasam-bazaha. Natambatra fasana iray izy mivady raha natokana fasana kosa ilay zaza natsangan’izy ireo.
Iray namoy ny ainy, nitohana tanteraka ny fifamoivoizana KAMIAOBE NIFANDONA TANY AMIN’NY RN2 (156) 19 août 2019 Nokendain’ilay jiolahy ilay ramatoa, lasa ny entana sarobidy rehetra AMBOHIDRAPETO (119) 19 août 2019 Efa any am-ponja vonjimaika ilay tovolahy FANOLANAN-JAZA TENY AMIN’NY PORT (115) 22 août 2019 Olona 4 namoy ny ainy, 19 naratra mafy LOZAM-PIFAMOIVOIZANA TAO MAEVATANANA (111) 20 août 2019 Tsy mitombina ny filazana fa nahita lohan’olona maty ilay ankizivavy TONIA MPAMPANOA LALANA (85) 21 août 2019 Tra-tehaka ireo 3 lahy saika hanondrana volamena an-tsokosoko NOSY BE HELL-VILLE (82) 22 août 2019